I-chanterelles ebusiweyo - iresiphi
Ukuze ungadakali kwisitya, umqathango wokuqala ngowona khetho olufanelekileyo lwe-chanterelles. Omnye uya kuthi: yintoni ongakhethayo, isayensi elula, yeza, iqokelelwe, ifakwe okanye ithengwe kwimarike. Nangona kunjalo, ukuba awunayo i-mushroom picker kwaye udla ukuya ehlathini, kufuneka uqaphele amanye amanqaku.
I-Chanterelle yi-fungus enobumba, ngoko kungcono ukushiya iimpawu ezinkulu ekucoceni, i-taste iya kuba yinto enqabileyo.
Iingqungquthela ezingenakwenzekayo zenzeke, kodwa ezibolile zifikile, ngoko ke siqokelela amakhowe ngokucophelela.
Ekugqibeleni, sikhumbula imigaqo ephambili ye-mushroom picker: Andiqinisekanga malunga nefungus - musa ukuyinqumla, akufuneki kube neefowuni kunye nokusebenza kwamashishini kufuphi neendawo zokudibanisa, kuba kungcono ukuhlala ulambile kunokuba utyhefu.
AmaClassics okupheka - ama-chanterelles, othosiweyo kunye namazambane, zokupheka zokupheka ziyahluka, kodwa apha akufuneki ukuba zidibanise kwaye ziphazamise ukunambitheka kwee-additives ze-mushrooms zehlathi.
Iifatata ezimhlophe eziphakathi kwe-crumbly - 6-8 pcs.;
i-anyanisi anyanisi - 2 ii-pcs.;
i-chanterelles esitsha - i-pack epheleleyo enee-1 litre;
Ioyile yemifuno ayifumananga i-odorless - 30 ml;
iphepu emhlophe emhlabathini - esicaleni somsi;
- 6-8 amasebe.
Siyilungisa ngama-mushroom, susa i-debris uze udibanise ngamanzi abandayo. Njengomthetho, ngaphambi kokutshiza ama-mushroom kungcono ukushiya ixesha elincinane ukuba uhambe, ngoko kuya kuba ngumgwebi. Sika iinqophiso zemilenze, iimilo ezinobungozi (ukuba zikhona) kwaye unqumle iifungus kwiindawo ezi-2-4 emlenzeni. Gcwalisa ngamanzi acocekileyo kwaye ubilise ikota yeyure. Ukuba kukho nayiphi na into engathandabuzekiyo, unako ukubilisa nge-anyanisi (ukuba kukho iinyowa ezinobuthi, i-anyanisi iya kuba mnyama). Emva koko, phonsa i-chanterelles kwi-colander uze uyiyeke. I-anyanisi ihlambulukileyo kwaye ihlanjwe ngeentsiba ezincinci okanye izibilini. Sifudumala ioli kunye nokubeka amakhowa. Xa umswakama uphuphuka kubo, faka i-ray kunye ne-Fry ndawonye kunye de kube yimbala emnyama. Njengoko uyakubona, ukwenza ama-chanterelles, othosiweyo nge-anyanisi, akunakunzima. Emva koko, iitapile zihlambulukile, zinqunywe ngendlela eqhelekileyo kunye nefry ngokwahlukileyo. Gcoba, ityuwa, i-pepper uze usebenze, ufafaze ngamacube.
Ngokuqinisekileyo, ama-mushroom angama-chanterelles ahlanganisiweyo ahlanganiswanga nje kuphela ngamazambane egolide. Kwaye kwii-pie unako ukubeka i-chanterelles etyusiwe ngeqanda. Ukulungiselela ukuzaliswa silungiselela ama-mushroom ngokwe-recipe yangaphambili, sipholile kwaye songeza amaqanda aphekiweyo aphekiweyo. Ukuzaliswa okunjalo okunomsoco kunye nokwanelisa kakhulu kuhlanganiswe nemvubelo inhlama, kunye nenhlama elungiselelwe kwi-kefir okanye whey.
Yongeza i flavour
Ngokuqinisekileyo, akukho mntu uya kuthi iingxube, ziboshwe nge-krimu okanye ukhilimu omuncu, unomdla ococekileyo, ococekileyo. I-chanterelles ephosiweyo enokrafa-kubalulekile ukukhumbula ukuba ukhilimu awudingi ukubiliswa, ngaphandle koko isitya siya kuba ne-lumps. Ngoko sityhala i-cream ekwimzuzu yokugqibela, sitshise kwaye ususe ngokukhawuleza ama-mushroom emlilweni. Kodwa nangakumbi i-chanterelles enonkcenkceshe ephosiweyo kunye ne-cream okomuncu, siya kubangela iresiphi evela kubafundi.
iifungi ezincinci ezincinane - ezi-2 ezinkulu;
i-anyanisi, ihlala ixesha elide - 200 g;
ibhotela engagqitywanga "i-Peasant", umzekelo - 50 g;
ikhaya elimuncu (elithengiweyo - lingekho ngaphantsi kwama-20% umxholo weoli) - 1 iglasi;
ezinamabala - 8-10;
ityuwa ngaphandle kwee-additives entabeni okanye elwandle - i-pinch e-1;
I-pepper emhlophe yomhlaba omhlophe okanye i-fragrant-ukunambitha.
Amakhowe ahlanjululwa kwaye ahlambuluke ngokucophelela ukuze asuse i-debris kunye neentsikelelo zeenaliti kunye namaqabunga. Bilisa i-chanterelles kwisincinci samanzi malunga nemizuzu engama-20, supha kwakhona kwaye ushiye ukukhupha. Fry the chanterelles ocoliweyo kunye anyanisi oqoshiwe. Xa ama-mushroom egolide, ityuwa, i-pepper, yongeza ukhilimu omuncu kunye nemifino, xuba kwaye ususe ngokukhawuleza emlilweni.
Izidlo ezivela kwi-recipe - ezihle kunye neyokuqala zokupheka ngokukhawuleza
"I-Teshchin ulwimi" isaladi
I-cutlets inyama encinci - iresiphi
Yenkomo yenkomo nge-gravy
Isobho somlenze nge vermicelli
Ama-eggplants kwi-oven - zokupheka ezimnandi zokutya kunye nezitya rhoqo imihla
Yintoni endingayipheka kuyo inkukhu?
Isaladi kunye nenkomo kunye neembotyi
Izilwanyana ezisuka kwizityalo ezisekhaya
Ingulube ihamba ehovini
IJam kwi-honeysuckle - 9 zokupheka kwezikhephe ezinobuncwane ezifanelekileyo
Iifoto zefoto zeThethati
I-Garden Botanical (Montevideo)
UClakia - ukutyala nokunyamekela
Ugqoke phantsi evulekile
Iincwadi ezona zifanelekileyo kwizoshishino ezifanele ukufunda
Ukukhala phantsi - wenzeni?
Ikhefu lekwindla yemithi yezithelo
Uhlobo luni lwesonka onokuyidla xa ulahlekelwa ngumzimba?
Indlela yokuhlambulula iifomignon ukukhaya kwi-grill?
Umntwana wazalwa ngaphandle kwezandla, kodwa sele esidla!
Candidiasis we emathumbu
Kuphi ukuba neeholide elingabizi eSochi?